पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ अचम्मको रहस्यहरु जानिराख्नुहोस् – च्यालेन्ज नेपाल
३. अश्लि’ल चलचित्र हेर्न महिलालाई पनि मन पर्छ
अश्लि’ल चलचित्रका पारखी पुरुष मात्र हुन्छन् भन्ने सोंच्नु भएको छ भने तपाइँ गलत हुनुहुन्छ । खासमा केटीहरु पनि अश्लि’ल चलचित्र हेर्न मन पराउँछन् । तर उनीहरुले यस्तो चलचित्र हेरेको कुरा कहिल्यै पनि स्वीकार भने गर्दैनन् ।
महिलाहरु एक्लै हुँदा अनेक ह’र्कत गर्छन् जुन अरु भएको बेला गर्न मिल्दैन । तर यो कुरा उनीहरुले अरुसँग भन्न मन पराउँदैनन् । ब्रा लगाएर नाच्नु वा विभिन्न पोज दिएर ऐना हेर्नु जस्ता क्रियाकलाप केटीहरुले एक्लै भएको बेला गर्छन् ।
Tags: #challengenepal #challengeonlinetv Challenge nepal challenge online tv Gopal pakhrin GOPAL TAMANG gopalpakhrin GOPALTAMANG च्यालेन्ज अन्लाइन टिभी च्यालेन्ज नेपाल च्यालेन्जअन्लाइनटिभी च्यालेन्जनेपाल पुरुषलाई थाहै नहुने महिलाका ७ अचम्मको रहस्यहरु जानिराख्नुहोस्
Previous युवतीको कुमा’रीत्व परीक्षण गर्ने कस्तो अनौठो तरिका ! हेर्नुहोस
Next धन लाभ हुनु अगाडि मिल्छन् यस्ता सङ्केत